အမှတ်စဉ်အနှောက်အယှက်ပေးသူ / အသရေဖျက်မှုအပေါ်တရား ၀ င်အောင်ပွဲများ Nicole Prause - သူမကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ပါ။
ဒီစာမျက်နှာအတွက် သတင်းသမားတွေ နှင့်ဒေါက်တာ Prause သောအခိုင်အမာဖတ်ရှုခဲ့ကြရသောအခြားစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူး သားကောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်တောင်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကောင်းနေတာလဲ၊ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေတောင်းဆိုတာပါ သူတို့ကိုပဲ့တင်သံသက်သေအထောက်အထားမဟုတ်ပါ။ စစ်မှန်သောသက်သေအထောက်အထားမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည့်အချက်အလက်များပေါ်တွင်အခြေခံသည်။ အများကြီး လူမှုမီဒီယာတွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသော "သက်သေအထောက်အထား" ကြားနာခြင်း၊ ဆီလျှော်ခြင်း၊ နိဂုံးချုပ်ခြင်း (သို့) အချက်အလက်အခြေပြုမဟုတ်သောကြောင့်တရားရေးဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများတွင်လက်ခံနိုင်သောအရာမဟုတ်ပါ။
အချက်အလက်များအရေးကြီးသောအခြေအနေများတွင် Dr.Prause ၏ပြောဆိုချက်များသည်ကောင်းစွာအခြေအနေမရောက်သေးပါ။ ဤစာမျက်နှာတွင်နီကိုးလ် Prause အပေါ်တရားဝင်အောင်ပွဲအချို့ကိုစုဆောင်းထားသည်။ သူမ၏တွစ်တာပရိသတ်များတွင်အလုပ်လုပ်သောအရာသည်တရားရုံး၏တရားရုံးတွင်မကျရောက်ပါ။
၂၀၁၃ ခုနှစ်တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသူ Dr.Prause Gary Wilson (သူမ၏ချို့ယွင်းချက် EEG လေ့လာမှုကိုဝေဖန်မှုအတွက်) ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနှောင့်ယှက်ခြင်း၊။ သူမသည်သုတေသီများ၊ ဆေးဆရာဝန်များ၊ ကုထုံးပညာရှင်များ၊ စိတ်ပညာရှင်များ၊ UCLA လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဟောင်းတစ် ဦး၊ အချိန် မဂ္ဂဇင်းအယ်ဒီတာ၊ ပါမောက္ခအမြောက်အများ၊ အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ၎င်း၏မိဘကုမ္ပဏီ MDPI အမေရိကန်ရေတပ်ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဆရာဝန်များသည်ပညာရေးဆိုင်ရာဂျာနယ်၏ဦးခေါင်းကို CUREUS, နှင့်ဂျာနယ် လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးဖောက်ခြင်း သူမ၏စွဲလမ်းမှုနှောင့်ယှက်မှုနှင့်မှားယွင်းသောတောင်းဆိုမှုများကိုတန်ပြန်ရန်အတွက် YBOP သည် Dr.Prause ၏လုပ်ဆောင်မှုအချို့ကိုဤကျယ်ပြန့်သောစာမျက်နှာများတွင်မှတ်တမ်းတင်ရန်ဖိအားပေးခဲ့သည်။ စာမျက်နှာ 1, စာမျက်နှာ 2, စာမျက်နှာ 3, စာမျက်နှာ 4, စာမျက်နှာ 5, စာမျက်နှာ 6.
သူတစ်ပါးကိုအနှောင့်အယှက် ပေး၍ အသရေဖျက်နေစဉ် Dr.Prause သည် - သုညအတည်ပြုသက်သေအထောက်အထား - သူမကကြောင်းဒဏ္.ာရီ “ သားကောင်” ညစ်ညမ်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသို့မဟုတ်လက်ရှိသုတေသနအခြေအနေနှင့် ပတ်သတ်၍ သူမ၏ပြောဆိုချက်များကိုသဘောမတူလိုသူမည်သူမဆိုအများဆုံးဖြစ်သည်။ (ကြည့်ပါ Nicole Prause ၏သားကောင်အဖြစ်ခံယူမှုသည်အခြေအမြစ်မရှိကြောင်းဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ) တရားမ ၀ င်ရှုပ်ထွေးမှုများနှင့်ဆုံးရှုံးမှုများအပြီးတွင်သူမ၏လုပ်ကြံသတ်ဖြတ်ခံရမှု၏တောင်းဆိုမှုများသည်အဆတိုးများပြားခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၏မဆုတ်မနစ်သောနှောင့်ယှက်မှု / သူမ၏ပစ်မှတ်များအားအသရေဖျက်မှုမှအာရုံလွှဲရန်ကြိုးစားနေပါသလား။
Prause အတွက်တရား ၀ င်ရှုံးနိမ့်မှုများရှိပါသလား။ သူမ၏သားကောင်သုံး ဦး သည်သူမသူတို့၏အလုပ်အကိုင်များကိုဖျက်ဆီးရန်နှင့်သူတို့၏ဂုဏ်သိက္ခာကိုဖျက်ဆီးရန်ကြိုးစားခဲ့သောကြောင့်အသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။
Donald အယ်လ်ဟီလ်တန်, Jr. et al ။ နီကိုးလ် Prause., San Texas ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းရှိ Texas ခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၅ - ၁၉-CV-5-OLG
အလက်ဇန်းဒါး Rhodes v ။ နီကိုးလ် Prause, et al.Pennsylvania ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၂ - ၁၉-cv-2
အာရုန်အမ် Minc, Esq v ။ Melissa အေလယ်သမားနှင့်နီကိုးလ် R. Prause, ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ: Cuyahoga ကောင်တီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက် CV-20-937026
အဘယ်ကြောင့် Prause ၏အခြားအသရေဖျက်မှုသားကောင်များသည်သူမအားတရားစွဲဆိုမှုမပြုခဲ့ကြသနည်း။ မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်မည်မျှကွာခြားနေပါစေအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုသည်လက်တွေ့ကျသောဆေးကုသမှုမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်တရား ၀ င်အခကြေးငွေသည်သူမ၏သားကောင်များအတွက်ဒေါ်လာရာနှင့်ချီ။ ရနိုင်သော်လည်း Prause အတွက်ဒေါ်လာသုညကုန်ကျသည်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူမကကံမကောင်းသောအာမခံကုမ္ပဏီဟာခုခံကာကွယ်ရေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဒီဝတ်စုံတွေနဲ့ဖုံးအုပ်ထားလို့ပါ။ ထို့ကြောင့် Prause သည်ကျွန်ုပ်နှင့်အခြားသူများကို (အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းခြင်းဖြင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သူနှစ် ဦး အပါအ ၀ င်) ကို ဆက်လက်၍ မထီမဲ့မြင်ပြုနေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒွန် Hilton နှင့် အဲလက်စ်ရော့ဒ်) ။ သူမ၏သားကောင်များကိုခြောက်သွေ့စေစဉ်သူမသည်အခွန်ငွေပေးစရာမလိုပါ။ ငါ (သို့) အခြားသူများအောင်ပွဲခံလျှင်တောင်မှပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ရှေ့နေအခကြေးငွေကောက်ခံခြင်းသည်ပြaticနာဖြစ်သည်။ ရှေ့နေများသာထိုကဲ့သို့သောဝတ်စုံအတွက်ရှေ့ထွက်လာကြ၏။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူသူမ၏တိုက်ခိုက်မှုအချို့သည်တရား ၀ င်အရေးယူမှုများကိုဖြစ်စေခဲ့သည် (နှင့်ရှေ့နေနာရီအတွင်းဒေါ်လာထောင်နှင့်ချီသောအသုံးစရိတ်များ) ။ ဤတရားစွဲဆိုမှုအဓိပ္ပါယ်ရလဒ်များရှိခဲ့ - Prause မှရှုံးသောအခါ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောတရား ၀ င်အောင်ပွဲများကိုဖော်ပြထားသည် အစောဆုံးမှလတ်တလော.
1) ဂယ်ရီဝီလ်ဆင် (သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်) သည် Sexologist Nicole Prause ဆန့်ကျင်ရေးဒုတိယအကြိမ်အောင်ပွဲခံခဲ့သည်
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူ porn သုတေသီသည်သူမ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုပျက်ကွက်ပြီးနောက်ပြစ်ဒဏ်နှင့်တရားရုံးကုန်ကျငွေများကိုပေးဆပ်ရသည်
Ashland, Oregon: ၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီ ၂၈ - အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံသူဂယ်ရီဝီလ်ဆင်သည်လိင်ပညာရှင်နှင့်အသံအပေါ်ဥပဒေအရအနိုင်ရရှိခဲ့သည် porn- စက်မှုလုပ်ငန်းထောက်ခံအားပေးသူနီကိုးလ် Prause.
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်က Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ Wilson အားဆန့်ကျင်သောတားမြစ်မိန့်ကိုရှာခဲ့သည်။ အဆိုပါ တရားရုံးက၎င်းကိုပယ်ချခဲ့ပြီး Wilson ၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးအဆိုကိုလက်ခံခဲ့သည်, PR ထွက်ခွာမိမိအရှေ့နေစရိတ်ပေးဆောင်ဖို့တာဝန်ရှိကြောင်း ause ။
Prause သည် ၂၀၂၀၊ ဒီဇင်ဘာလတွင် Wilson အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်ဆန့်ကျင်။ ဒုတိယပြစ်မှုကျူးလွန်သည့်တရားစွဲဆိုမှုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ၂၀၂၁၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက်နေ့ကြားနာမှုတစ်ခုတွင် Oregon တရားရုံးတစ်ခုက Wilson ၏မျက်နှာသာပေးမှုကိုစီရင်ခဲ့ပြီး Prause အားကုန်ကျစရိတ်များနှင့်ထပ်ဆောင်းပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခဲ့သည်။
လွန်ခဲ့သော 18 လအတွင်း ချီးမွမ်းခြင်းကိုလူသိရှင်ကြားခြိမ်းခြောက် (သို့မဟုတ်တင်သွင်း) တစ်ဒါဇင်တရားစွဲဆိုမှုသိရသည် တိတ်ဆိတ်သို့အခြားသူများကိုအနိုင်ကျင့်ဖို့ရည်ရွယ်။ သူမသည်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်သောသူတို့ကိုပစ်မှတ်ထား ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်သူမ၏ရင်းနှီးသောဆက်ဆံမှု နှင့်သူမ၏မလိုတမာသောအပြုအမူသို့မဟုတ်သူမအပေါ်လက်ရှိလှုပ်ရှားနေသည့်အသရေဖျက်မှု ၃ ခုတွင်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုပြုသူ*
Wilson ၏နောက်ဆုံးတရားဝင်အောင်ပွဲသည် Wilson ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်ကိုဆင်ဆာဖြတ်တောက်ရန်ကြိုးပမ်းမှုများစွာကြောင့်ပျက်ကွက်ခဲ့ရသည်။ သူချင်း စိတ်ကျန်းမာရေးပညာရှင်များ။ သူမ၏ရန်လိုသောလှုပ်ရှားမှုကိုလွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကစတင်ခဲ့သည် Prause သည်သူ၏ site ၏ကောင်းစွာတည်ထောင်ထားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်လျှောက်ထားခဲ့သည်Wilson ၏ထိန်းချုပ်မှုကိုအထူးခွင့်ပြုချက်အပါအ ၀ င် အမှန်တကယ် URL ကို ("YourBrainOnPorn.com") ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ဆုပ်ကိုင် ပျက်ကွက်နှင့်အမှတ်အသားများကို ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင် Wilson ၏အမည်တွင်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
ဤအတောအတွင်း, မတ်လ 2019 ခုနှစ်, Prause ရဲ့ကွန်ဖက်ဒရိတ် ဒံယလေကအေ Burgess ကုန်အမှတ်တံဆိပ် - ချိုးဖောက်ဒိုမိန်းအမည်မှတ်ပုံတင်ထား "RealYourBrainOnPorn.comသင်၏” BrainOnPorn.com traffic ကို impostor website သို့လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်ပွင့်လင်းမြင်သာသောနည်းလမ်းများဖြင့်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ရှေ့နေများစွာပြီးနောက် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် Wilson သည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်းအဖြစ် RealYourBrainOnPorn.com ဒိုမိန်းအမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ အစောပိုင်း၊ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာလတွင် impostor site ၏တွစ်တာအကောင့် @BrainOnPorn ဖြစ်သည် အမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ထားသည် နှောင့်ယှက်ခြင်းအဘို့အ။
နောက်ဆုံးတရားရုံးအနိုင်ရရှိပြီးနောက် Wilson က“ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံတွေကိုညစ်ညမ်းတဲ့လူတွေကိုလူသိရှင်ကြားပြောဆိုရဲတဲ့လူတွေကိုညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကြောင့်ငါအရမ်းအံ့သြသွားတယ်” ဟုပြောသည်။ သူကဆက်ပြောသည် -“ ညစ်ညမ်းတဲ့ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာမဟာမိတ်များရဲ့ဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုနည်းဗျူဟာသည်သိပ္ပံဆိုင်ရာနှင့်လူထုဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုကိုတားဆီးနိုင်သည်။ Big Tobacco သည်တစ်ချိန်တည်းမှာပင်အသုံးပြုသူများနှင့်၎င်းမှအမြတ်ထုတ်သူများအတွက်အန္တရာယ်ရှိသောမှတ်တမ်းများကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည့်အများပြည်သူမှအာရုံလွဲစေသည်။ ”
Wilson ကအိမ်ရှင်အဖြစ် www.YourBrainOnPorn.comညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏ဆိုးကျိုးများနှင့်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းနောက်ဆုံးပေါ်သုတေသန၊ မီဒီယာနှင့်ကိုယ်တိုင်တင်ပြချက်များအတွက်ရှင်းလင်းရေးစင်တာ။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကသူတင်ပြခဲ့သည် iအများကြီးလူကြိုက်များ TEDx ဟောပြောချက် “ Great Porn Experiment” (အမြင် ၁၄ သန်း) ။ Wilson သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသောပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသောသုတေသနနှင့်လူထုထုတ်ပြန်ချက်များကိုကြာမြင့်စွာကတည်းကဝေဖန်ခဲ့သည်။ သူလည်းရေးသားသူဖြစ်သည် အမေဇုံအရောင်းရဆုံး Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ။ ၎င်းတွင်ရရှိနိုင်သည် ဘာသာစကားမျိုးစုံ, နှင့်တထုတ်ဝေပြီးသားပြီးခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်၏ထိပ်တန်းစိတ်ကူးယဉ်မဟုတ်သောစာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုအဖြစ်ချီးကျူးခဲ့သည်။
* Donald အယ်လ်ဟီလ်တန်, Jr. et al ။ နီကိုးလ် Prause., San Texas ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းရှိ Texas ခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၅ - ၁၉-CV-5-OLG; အလက်ဇန်းဒါး Rhodes v ။ နီကိုးလ် Prause, et al., Pennsylvania ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုခရိုင်တရားရုံး၊ အမှုအမှတ် ၂ - ၁၉-cv-2 နှင့် အာရုန်အမ် Minc, Esq v ။ Melissa အေလယ်သမားနှင့်နီကိုးလ် R. Prause, ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ: Cuyahoga ကောင်တီ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်အတွက် CV-20-937026 ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် Prause ကသူတို့ကိုပါပစ်မှတ်ထားသည်ဟုကျိန်ဆိုသောကြေညာချက်များကိုတင်ပြခဲ့သည်။ ကျမ်းကျိန်လွှာ # 1, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 2, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 3, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 4, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 5, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 6, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 7, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 8, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 9, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 10, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 11, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 12, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 13, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 14, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 15, ကျမ်းကျိန်လွှာ # 16.
ဂယ်ရီ Wilson ၏ကြေငြာချက်
အောက်တွင်ကျွန်ုပ်သည်တရားရုံးသို့ပေးပို့သောကြေငြာချက်ဖြစ်သည် (ကျွန်ုပ်သည်အထောက်အကူပြုသောစာမျက်နှာ ၁၀၀ ကျော်ကိုလည်းထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်) ။
ငါ, ဂယ်ရီ Wilson ကအောက်ပါအတိုင်းကြေငြာခြင်းနှင့်ဖော်ပြ:
ဤအမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ဆန့်ကျင်ဖက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည့်ဒုတိယ SLAPP ဝတ်စုံဖြစ်သည်။ ပထမ ဦး ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ကို ၂၀၂၀၊ သြဂုတ် ၆ ရက်၊ ကယ်လီဖိုးနီးယားအထက်တရားရုံးမှကြားနာခြင်းအပြီးတွင်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့သည်။ချီးမွမ်းကြလော့ v ။ Wilson က ဖြစ်ရပ်မှန်အမှတ် 20TRO01022) ။ တရားသူကြီးသည်ကျွန်ုပ်၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးအဆိုကိုလက်ခံခဲ့ပြီးတရားလို၏တရားစွဲဆိုမှုကိုပယ်ချခဲ့သည်။ သူမအနေဖြင့်သူမအနေဖြင့်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားနှင့် ပတ်သက်၍ ပြောဆိုခွင့်ကိုနှုတ်ပိတ်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်ဟုတရား ၀ င်ကြေငြာခဲ့ပြီးသူမ၏တရား ၀ င်ဆောင်ရွက်မှုသည်အကျိုးအမြတ်အနည်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
ကြားနာခြင်းမတိုင်မီတစ်ပတ်အလိုတွင်တရားလို၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေကသူမအနေဖြင့်တရားဥပဒေအရတရားစွဲဆိုခြင်းကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သောကြောင့်သူမအနေဖြင့်နုတ်ထွက်ရန်ကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ (၂၀၂၀၊ ဇူလိုင် ၃၁ ရက်စွဲဖြင့် Brett A. Berman, Esq ၏ကြေငြာချက်မှ) ။ အစောပိုင်းကတင်ပြချက်များအရသူသည်ခွင့်ပြုချက်မရှိသောသက်သေအထောက်အထားအမြောက်အမြားကိုတင်ပေးရန်တောင်းဆိုနေသည်။ တရားသူကြီးကသူမရှေ့နေ၏နှုတ်ထွက်မှုကိုလက်ခံရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင်ကြားနာခြင်းတွင်တရားသူကြီးသည်တရားလိုဘက်မှကြားနာခြင်း၊ ဆီလျှော်ခြင်း၊ နိဂုံးချုပ်ခြင်းစသည်ဖြင့်တရား ၀ င်တရား ၀ င်ကျိန်ဆိုခြင်းကိုကြေငြာခဲ့သည်။
တရားလိုသည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဖက်ဒရယ်တရားရုံးများတွင်ဆိုင်းငံ့ထားသောအသရေဖျက်မှု ၃ ခုဖြင့်တရားခံဖြစ်သည်။ Donald အယ်လ်ဟီလ်တန် Jr v ။ နီကိုးလ် Prause နှင့် Liberos LLC, ဖြစ်ရပ်မှန်: SA: 19-CV ကို -00755-OLG; အလက်ဇန်းဒါး Rhodes v ။ နီကိုးလ် Prause နှင့် Liberos LLC, ဖြစ်ရပ်မှန် 2: 19-CV ကို -01366-MPK; နှင့် အာရုန်အမ် Minc, Esq v ။ Melissa အေလယ်သမားနှင့်နီကိုးလ် R. Prause, ဖြစ်ရပ်မှန်အဘယ်သူမျှမ: CV-20-937026 ။ ပထမ ဦး ဆုံးအမှုနှစ်ခုတွင်၊ ကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်အမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီးများအနေဖြင့်တရားလိုကသူတို့ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းကျိန်ဆိုသည့်ကြေငြာချက်များဖြင့်တင်ပြခဲ့သည်။
တရားလိုသည်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်မျိုးစုံအပေါ်အခြေ ပြု၍ အုပ်ချုပ်မှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုများကိုနှစ် ဦး စလုံးတွင်ပါ ၀ င်ပတ်သက်ခြင်း၏သမိုင်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းတရားလိုသည်တိုင်ကြားချက်များ / အစီရင်ခံစာ ၄၀ ကျော်ကိုပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘုတ်အဖွဲ့များ၊ ဥပဒေစိုးမိုးရေး၊ အလုပ်ရှင်များနှင့်ကြီးကြပ်ရေးအေဂျင်စီများ / ခုံရုံးများသို့ (အနည်းဆုံးလူ ၂၈ ယောက်နှင့်အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ဆန့်ကျင်။ ) တင်သွင်းခဲ့သည်။ အချို့ဘုတ်အဖွဲ့များနှင့်အေဂျင်စီများသည်သတင်းပေးသူများ၏မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသည့်တိုင်ထိုကဲ့သို့သောတိုင်ကြားမှုများ / အစီရင်ခံစာများပိုမိုများပြားသည်မှာသေချာသည်။ ဥပမာအားဖြင့် - သူမကကျွန်ုပ်ကိုအော်ရီဂွန်စိတ်ပညာဘုတ်အဖွဲ့တွင် (လိုင်စင်မရှိဘဲစိတ်ပညာကိုကျင့်သုံးခြင်းအတွက်) တင်သွင်းသည့်တိုင်ကြားမှုနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ ငါကအကျဉ်းချုပ်ပယ်ချခံခဲ့ရသည်ပြီးနောက်ငါကသာအကြောင်းကိုလေ့လာသင်ယူခဲ့သည်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိတ်ပညာရှင်၊ စာရေးဆရာ၊ ခန္ဓာဗေဒ၊ ဇီဝကမ္မဗေဒနှင့်အသက်မွေး ၀ မ်းကျောင်းဆိုင်ရာသင်တန်းပို့ချသူ မှလွဲ၍ မည်သည့်အခါကမှကျွန်ုပ်မပါဝင်ခဲ့ပါ။ တောင်ပိုင်းအော်ရီဂွန်တက္ကသိုလ်မှတွဲဖက်သင်တန်းပို့ချသူဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကသို့မဟုတ်ဒီတော့တရားလိုအနည်းဆုံး4သေးငယ်တဲ့တောင်းဆိုမှုများဝတ်စုံ ((အခြေအမြစ်မရှိတားဆီးမိန့်အမိန့်တောင်းဆိုမှုအပြင်) တင်သွင်းခဲ့ပြီး, များစွာသောလူသိရှင်ကြားခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ တရားလိုသည်အထက်ဖော်ပြပါအသရေဖျက်မှုကိစ္စများတွင်ကျိန်ဆိုချက်များထုတ်ပြန်ခဲ့သူများကိုသူမ၏အန္တရာယ်ရှိသောသတင်းပို့ခြင်းနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်အားအန္တရာယ်ရှိစွာအသုံးပြုခြင်းကိုမကြာခဏညွှန်ကြားသည်။ သူမကကျွန်တော်တို့ကိုသက်သေခံတွေအဖြစ်ခြိမ်းခြောက်ဖို့ကြိုးစားနေတာလား။
ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကတရားလိုသည်ကျွန်ုပ်၏ဆယ်စုနှစ်သက်တမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်၏အမှန်တကယ် URL အတွက်လျှောက်လွှာအပါအဝင်ငါ၏အကောင်းစွာထူထောင်ဘုံဥပဒေကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက် USPTO ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုမှတ်ပုံတင်ရန်နှင့်အကာအကွယ်ပေးရန်နှင့်သူနှင့်သူမ၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကြားဖြတ်အစိုးရမှတရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကျူးကျော်ခြင်းနှင့်ချိုးဖောက်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်အတွက်အချိန်နှင့်နာရီပေါင်းရာချီသောအချိန်လိုအပ်သည်။ သူမကကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်ကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်၏ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှု (မအောင်မြင်ပါ) ကိုခြိမ်းခြောက်။ လှည့်စားခဲ့သည်။
ယခင်ကပညာရှင်တစ် ဦး သည်လိင်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအတွက်သုတေသနနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာဝေဖန်သုံးသပ်သူဖြစ်ပြီးညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများအပါအ ၀ င်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စာရေးသူ၊ ထောက်ခံသူနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာဝေဖန်သုံးသပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏အလုပ်သည်ဒီဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများကိုအာရုံစိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်လူကြိုက်များသော YourBrainOnPorn.com ၀ ဘ်ဆိုဒ်ကိုလက်ခံသည်။ အပြာစာပေလေ့လာမှုကဏ္inမှအမေဇုန်၏ရောင်းအားအကောင်းဆုံးစာအုပ်သည်ကျွန်ုပ်စာအုပ်ဖြစ်သည် Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ။ ၎င်းကိုဘာသာစကားခုနစ်ခုဖြင့်ဘာသာပြန်ထားပြီးဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏သက်သေအထောက်အထားအခြေပြု TEDx ဟောပြောချက်“ The Great Porn Experiment” ကိုအကြိမ်ပေါင်း ၁၃ သန်းကျော်ကြည့်ရှုခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
တရားလို၏အမြင်များနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်ပတ်သက်သောကျွန်ုပ်၏အမြင်များနှင့်၎င်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများသည်မကြာခဏကွာခြားသည်။ ကျွန်ုပ်သည်သူမ၏သုတေသနကို“ မုန်းသည်” မဟုတ်သော်လည်းတရားလို၏စာတမ်းများနှင့်သူမ၏နိဂုံးချုပ်နှင့်ပတ်သတ်သောသူမ၏အများပြည်သူဖော်ပြချက်အချို့ကိုလူသိရှင်ကြားဝေဖန်ခဲ့သည်။ တရားလိုသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ ဒီဟာကသူမ၏အများပြည်သူအွန်လိုင်း ၀ န်ဆောင်မှုကိုစက်မှုလုပ်ငန်း၏အဓိကစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုမှရရှိခြင်း၊ သူမတက်ရောက်သည့်စက်မှုလုပ်ငန်းဖြစ်ရပ်များ၏ဓာတ်ပုံများ၊ လူမှုမီဒီယာအပေါ်စက်မှုလုပ်ငန်း၏အကျိုးစီးပွားကိုသူတသမတ်တည်းကျောထောက်နောက်ခံပြုခြင်းနှင့်လူမှုမီဒီယာကိုတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုတို့အပေါ် အခြေခံ၍ ပြောကြားသည်။ အွန်လိုင်းညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်ကိုသတိပြုမိလာစေသည့်မကောင်းသောသတင်းများမှတစ်ဆင့်
၂၀၁၃ ခုနှစ်မှယနေ့အထိယနေ့အထိတရားလိုသည်မီဒီယာနှင့်လူမှုမီဒီယာများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ မှားယွင်းသော၊ လူသိရှင်ကြားရှုတ်ချသောပြောဆိုချက်များကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ တရားလိုသည်အခြားအသရေဖျက်မှုပြောဆိုမှုများကြားမှကျွန်ုပ်သည်အမျိုးသမီးများအား“ အမဲလိုက်သူ” ဖြစ်ကြောင်းမဟုတ်မမှန်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ငါသူမအပေါ်“ သေခြင်းတရားခြိမ်းခြောက်မှု” လုပ်ခဲ့ပြီးအခြားသူများကိုလည်းအလားတူလုပ်ရန်အားပေးခဲ့သည်၊ ငါတရားမဝင်ကွန်ပျူတာကျူးကျော်ပါဝင်ပတ်သက်ပြီ ကျွန်ုပ်၏အထောက်အထားများကိုတလွဲတင်ပြခဲ့ခြင်း၊ ငါလိမ်လည်မှုအတွက်စေ့စပ်ပြီ ငါဟာဖြူ supremacist တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးမုန်းတီးတဲ့အဖွဲ့ ၀ င်ဖြစ်တယ်၊ ငါသိပ္ပံပညာရှင်များခြိမ်းခြောက်ပြီ။
တရားလိုသည်ဒီဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများအသုံးပြုခြင်း၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအန္တရာယ်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်၏အမြင်များကိုဝေဖန်သူများစွာ၏အကြောင်းကိုအလားတူအသရေဖျက်မှုထုတ်ပြန်ချက်များပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း၎င်းတို့အနက်မှအများစုသည်သူမအားတရားစွဲဆိုထားပြီးဖြစ်သည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအားဖြင့်သူသည်လူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်အသရေဖျက်မှုကိစ္စများကြားမှပင်။
ORS § ၃၁.၁၅၀ တွင်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအထူးလုပ်ထုံးလုပ်နည်းဆိုင်ရာအထူးအဆိုပြုချက်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခွင့်အရေးများကိုတားဆီးရန်အတွက်နှောင့်ယှက်ရန်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ထိုက်တန်သည့်တောင်းဆိုမှုများကိုဖယ်ရှားရန်ဖြစ်သည်။ တရားရုံးများသည်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားနှင့်ဆိုင်သောကိစ္စရပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း။ “ အများပြည်သူအတွက်ဖွင့်လှစ်ထားသည့်နေရာသို့မဟုတ်အများပြည်သူဆိုင်ရာဖိုရမ်တွင်” ဖွင့်ဆိုချက်အားလုံးတွင်အကျုံးဝင်သည်။ (၁) အပြုအမူတစ်ခုခု၊ (၂) လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်၏အခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာအခွင့်အရေးကိုတိုးမြှင့်ခြင်း၊ (31.150) အများပြည်သူဆိုင်ရာကိစ္စရပ်သို့မဟုတ်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိစ္စနှင့်ဆက်စပ်။ ။ “ အများပြည်သူဆိုင်ရာပြissueနာ” နှင့်“ အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပြissueနာ” တို့ကိုလည်းကျယ်ပြန့်စွာနားလည်ထားသည်။ အွန်လိုင်းရှာဖွေမှုတစ်ခုအရနိုင်ငံတစ်ဝန်းရှိတရားရုံးငယ်များသည်သင့်တော်သည့်အခါ SLAPP ကိုဆန့်ကျင်သောလှုပ်ရှားမှုများကိုပေးခဲ့သည်။
ဒီအမှုအားအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာပြinနာနှင့်စပ်လျဉ်း။ ကျွန်ုပ်၏ကာကွယ်ပြောဆိုသောမိန့်ခွန်းမှပေါ်ပေါက်လာသည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု၏ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောသက်ရောက်မှုများနှင့်တရားလိုအပါအ ၀ င်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုတေသီများ / ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများ၏လှုပ်ရှားမှုများ။ လယ်ပြင်၌ကျွမ်းကျင်သောသုတေသီများသည်တရားလိုနှင့်ကိုက်ညီသူများမဟုတ်ကြသော်လည်းငါနှင့်တူသောအမြင်များကိုမကြာခဏဖော်ပြကြသည်။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် YourBrainOnPorn.com သည်တစ်နေ့လျှင်ပျမ်းမျှ 15,000 ည့်သည် ၁၅၀၀၀ ခန့်လက်ခံရရှိသည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနှင့် of ည့်သည်များစိတ်ဝင်စားသည့်အခြားပစ္စည်းများအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုသုတေသနပြုလုပ်ရန်စင်တာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ကွန်ရက်စာမျက်နှာ ၁၂၀၀၀ ကျော်၏ရာခိုင်နှုန်းအနည်းငယ်သည်သိပ္ပံပညာရှင်များ၏သုတေသနနှင့်စာနယ်ဇင်းထုတ်ပြန်ချက်များအပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်ရည်ရွယ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်၏ဝေဖန်ချက်အချို့သည်နည်းစနစ်များနှင့်တောင်းဆိုမှုများကိုဝေဖန်သည်။ အချို့သည်သိသာထင်ရှားသည့်ဘက်လိုက်မှုနှင့်သုတေသီများ / ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူများ၏သံသယဖြစ်ဖွယ်အပြုအမူများကိုဖြေရှင်းသည်။ နှင့်အချို့သောတရားလိုရဲ့ရန်လိုသောလှုပ်ရှားမှုများနှင့်တရားလိုနှင့်အခြားသူများကထုတ်လုပ်အသရေဖျက်ပစ္စည်း။
ကျွန်ုပ်၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ စာအုပ်နှင့် TEDx ဟောပြောချက်များကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်စိတ်ဝင်စားမှုမှထင်ရှားသည်မှာအများပြည်သူသည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေ၏သက်ရောက်မှုများနှင့်ဤနယ်ပယ်ရှိသုတေသီများ၏လုပ်ဆောင်မှု / အပြုအမူများကိုစိတ်ဝင်စားသည်။ ထို့ကြောင့်ငါ§ 31.150 ORS ၏ "အများပြည်သူအကျိုးစီးပွား" စမ်းသပ်မှုတွေ့ဆုံခဲ့ပြီးပြီယုံကြည်ပါတယ်။
Oregon ၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးဥပဒေအရအများပြည်သူအကျိုးစီးပွားစစ်ဆေးမှုကိုစစ်ဆေးပြီးသည်နှင့်တရားလိုသည်အယူခံဝင်မှုအပေါ်လွှမ်းမိုးနိုင်ခြေရှိသည်ဟုသက်သေပြနိုင်ခြင်းမရှိလျှင်တရားရုံးသည်သပိတ်မှောက်ရန်အဆိုကိုပေးလိမ့်မည်။ ORS 31.150 § (3) ။ တရားလိုသူမ၏တောင်းဆိုမှုများအပေါ်ရေပန်းစား၏ဖြစ်နိုင်ခြေမပြနိုင်ပါ။
သူမ၏အစောပိုင်းက SLAPP ဝတ်စုံကိုတွင်တရားလိုသည်များပြားလှသောလုပ်ကြံဖန်တီးမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ထိုက်တန်သောတားမြစ်မိန့်ကိုရှာခဲ့သည်။ ဒီဝတ်စုံမှာသူမကအရေးယူမှုအကြောင်းရင်းများစွာကိုစာရင်းပြုစုထားတယ်၊ ဒါပေမယ့်သူမတင်ပြတဲ့တစ်ခုတည်းသောအထောက်အထားကငါရေးသားခဲ့တဲ့စွပ်စွဲချက်များဖြစ်သည်။။ ငါအမှန်ပင်နောက်ဆုံးတ ဦး တည်းမှလွဲ။ ထုတ်ပြန်ချက်များအားလုံးဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ နောက်ဆုံးဆောင်းပါးကိုဂျာနယ်လစ် Megan Fox ကဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်တွင်ဖော်ပြထားသည်မှာ 'No Fap' Porn စွဲလမ်းမှုပံ့ပိုးမှုအဖွဲ့တည်ထောင်သူသည်အဂတိလိုက်စားမှုအတွက်စွဲချက်တင်ခံထားရသောလိင်တူချစ်သူအားတရားစွဲဆိုခြင်းဖြစ်သည်။ (တရားလိုသည်ခေါင်းစဉ်တွင်ဖော်ပြထားသောလိင်ပညာရှင်ဖြစ်သည်။ )
တရားလိုသည်ဆိုရှယ်မီဒီယာနှင့်စာနယ်ဇင်းတို့တွင်အလွန်အသံကျယ်သောပြည်သူ့ရေးရာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာသူမနှင့်သူမ၏လုပ်ဆောင်မှုများအကြောင်းအခြားသူများကပြောရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။ တရားစွဲဆိုခဲ့သူသည်ကျွန်ုပ်အားမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်ကိုမျှအသရေဖျက်မှု၏တံခါးခုံသို့မတက်စေပါဟုစွပ်စွဲပြောဆိုသည်။ သူတို့အားလုံးကကျွန်ုပ်အားမလုပ်ခဲ့ကြသော်လည်းကျွန်ုပ်ပြုလုပ်ခဲ့သူများသည်တရားလို၏ဖြစ်နိုင်ခြေဘက်လိုက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျွန်ုပ်၏ကောင်းသောယုံကြည်ချက်အမြင်များနှင့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များကိုလူသိရှင်ကြားထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။ သူမအကျင့်ဆိုးကိုလူသိရှင်ကြားဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ထုတ်ပြန်ချက်များသည်အများပြည်သူအကျိုးစီးပွားဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့်သက်ဆိုင်သောကာကွယ်ထားသောမိန့်ခွန်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏မှတ်ချက်အားလုံးသည်အများပြည်သူရရှိနိုင်သောသတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အပြုအမူအပေါ် အခြေခံ၍ တရားလို၏ဆိုရှယ်မီဒီယာပို့စ်များတွင်တင်ပြခြင်းသို့မဟုတ်တရားရေးဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုများတွင်သူမ၏ကျိန်ဆိုချက်များတွင်ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျလေ့လာတွေ့ရှိခဲ့သည်။ တရားလို၏လုပ်ရပ်များနှင့်သူမ၏အလုပ်ကိုမှတ်ချက်ပေးသည့်အနေဖြင့်သူမသည်သူမ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာကိစ္စများကိုကျူးကျော်ခြင်း၊ သူမစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ခြင်း၊ သူမကိုခြိမ်းခြောက်တာမျိုး၊ သူမခြိမ်းခြောက်တာမျိုးလုပ်ဖို့တစ်ခါမှမတိုက်တွန်းခဲ့ဘူး၊ သူမရဲ့လျှို့ဝှက်အချက်အလက်တွေကိုလည်းသူမလုံခြုံရေးအတွက်အန္တရာယ်ရှိစေမယ့်အရာတွေကိုတစ်ခါမှမတင်ခဲ့ဘူး။
တရားလိုကကျွန်ုပ်၏စွပ်စွဲချက်မှတ်ချက်များအားလုံးကိုမကြာသေးမီကပြုလုပ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တင်ပြခဲ့သောဖော်ပြချက်များအားလုံးသည်ကျွန်ုပ်ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သောအလားတူတွေ့ရှိချက်များကဲ့သို့အစပိုင်းတွင်လွန်ခဲ့သော ၁၂ လမတိုင်မီကဖော်ပြခဲ့သည်။ အသရေဖျက်မှုတောင်းဆိုမှုများကိုတစ်နှစ်အတွင်းပြုလုပ်ရမည်။ (ORS § ၁၂.၁၂၀)
နိဂုံးချုပ်အနေဖြင့်တရားလို၏တိုင်ကြားချက်သည်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်ကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမခံယူနိုင်သော၊ တရားရုံးမှတရားလို၏အလားတူအချည်းနှီးသောတောင်းဆိုမှုများအပေါ် အခြေခံ၍ ကယ်လီဖိုးနီးယား Superior တရားရုံးမှခွင့်ပြုခဲ့သည့်မကြာသေးမီကဆန့်ကျင်သော SLAPP အဆိုကိုသတိပြုမိရန်တောင်းဆိုပြီး ORS § 31.150 နှင့်ငါ့တရားရုံးကုန်ကျစရိတ်များအရသပိတ်မှောက်ရန်ကျွန်ုပ်၏အဆိုကိုလေးစားစွာတောင်းဆိုခဲ့သည်။
အော်ရီဂွန်ပြည်နယ်ဥပဒေများအရမှားယွင်းသောသက်သေခံခြင်းပြစ်ဒဏ်အရအထက်ပါအချက်သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ဗဟုသုတမှန်ကန်ကြောင်းကြေငြာသည်။ ဒီ 15 ကွပ်မျက်ခံရth အက်ရှလင်း, အော်ရီဂွန်မှာဒီဇင်ဘာလ 2020 ၏နေ့။
2) YBOP သည် www.RealYourBrainOnPorn.com ကိုကုန်အမှတ်တံဆိပ်ချိုးဖောက်မှုဖြေရှင်းခြင်းတွင် (၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီ) တွင်ရရှိသည်။
အထူးသဖြင့်ဂယ်ရီ Wilson သည်သူ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအပေါ်ချိုးဖောက်သည်ဟုစွပ်စွဲချက်များကိုဖြေရှင်းခြင်းအဖြစ် RealYourBrainOnPorn.com (RealYBOP) ဒိုမိန်းအမည်ကိုရရှိခဲ့သည်။ ကျန်တဲ့ ဒီစာမျက်နှာ YBOP ပလက်ဖောင်းကိုဖျက်သိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုဖြင့်စတင်ခဲ့သည့် Prause နှင့်သူမ၏ခရိုနီများ၏ရန်လိုသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်၊ ၎င်းနောက် visitors ည့်သည်များကိုရှုပ်ထွေးစေရန်ကြိုးပမ်းမှုများဖြင့်နောက်ဆုံးတွင် YBOP ၏ကိုယ်ပိုင်အမှတ်တံဆိပ်ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကိုရှုတ်ချခဲ့သည်။ (ပုံပြင်အပြည့်အစုံ)
စဉ် ဒံယလေကအေ Burgess www.RealYourBrainOnPorn.com, မှတ်ပုံတင်ပြီး အများအပြားသားကောင်များ သူမ orchestrated ယုံကြည်ပါတယ် အကြောင်းအရာ RealYBOP အကြောင်းနှင့်၎င်း၏လူမှုမီဒီယာအကောင့်များကိုလည်ပတ်ခဲ့သည်။ Wra ၏အစီရင်ခံစာနှင့်လူမှုရေးမီဒီယာအကောင့်များနှင့် realyourbrainonporn.com တို့၏စီမံခန့်ခွဲမှုအားအထောက်အထားများစွာကထောက်ပြပြောဆိုခြင်းသည်ပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုငြင်းပယ်နိုင်သည်။ သို့သော်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေ့လာခြင်း၊ RealYBOP ကျွမ်းကျင်သူများ၏စာပေးစာယူ၊သက်သေ ဒီမှာ).
RealYBOP ဆိုဒ်ကို“ Real Your Brain On Porn” အမည်ရှိတွစ်တာအကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်လည်းအသုံးပြုခဲ့သည်။@BrainOnPorn) ။ ယင်း မန်နေဂျာ တွစ်တာအကောင့်၏အမြင်များကိုထင်ဟပ်စေသည်ဟုလူသိရှင်ကြား (ယူဆသည် Prause) ကလူသိများသည် ယခုပိတ်နေသော RealYBOP ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်ရှိ“ ကျွမ်းကျင်သူများ” အားလုံး.
၎င်း၏လေ့ကျင့် "စုပေါင်း" အသံထင်, @BrainOnPorn တွစ်တာအကောင့်ကတွစ်တာ ၁၀၀၀ ကျော်သောအသရေဖျက်မှုနှင့်အန္တရာယ်ရှိသောထုတ်ပြန်ချက်များ Nicole Prause နှင့်သဘောမတူသူ (ဆိုလိုသည်မှာလိင် / porn လုပ်ငန်း၏ ဦး စားပေးဇာတ်လမ်းကိုဆန့်ကျင်ဝံ့သူမည်သူမဆို) အကြောင်း။ အောက်တိုဘာလ, 2020 ခုနှစ်တွင်အကောင့် အမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည် တွစ်တာစည်းမျဉ်းတွေကိုချိုးဖောက်တဲ့အတွက်Prause ၏မူလတွစ်တာအကောင့်သည်လည်းနှောင့်ယှက်မှုအတွက်အမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်) ။ အများကြီးအဘို့ဤကျယ်ပြန့်စာမျက်နှာများကိုကြည့်ပါ:
3) ဂယ်ရီ WilsonPorn ပေါ်တွင်သင်၏ဦးနှောက်) သူ့ကိုနှုတ်ပိတ်ရန် Sexologist Nicole Prause ၏ကြိုးပမ်းမှုဥပဒေအရအနိုင်ရရှိခဲ့သည်
Ashland, Oregon: ၂၀၁၂၊ သြဂုတ် ၁၆ ရက် - အရောင်းရဆုံးစာရေးဆရာနှင့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးထောက်ခံသူ Gary Wilson သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနပညာရှင်နှင့်နီကိုလးပရာ့စ်အားထောက်ခံသူများအားတရားဥပဒေအရအနိုင်ရခဲ့သည်။ သြဂုတ်လ ၆ ရက်နေ့တွင်လော့စ်အိန်ဂျယ်လိစ်ကောင်တီအထက်တရားရုံးမှ Wilson အားတားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုရယူရန်ကြိုးပမ်းမှုသည်အများပြည်သူပါ ၀ င်မှုအားဆန့်ကျင်။ တရား ၀ င်သော“ မဟာဗျူဟာဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှု” (အများအားဖြင့်“ SLAPP ဝတ်စုံ”) ကိုပြrul္ဌာန်းခဲ့သည်။ အနှစ်သာရအားဖြင့်တရားရုံးက Prause သည် Wilson အားတိတ်ဆိတ်စွာအနိုင်ကျင့်ရန်နှင့်လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အားသူ၏အခွင့်အရေးအားလျှော့ချရန်အတွက်တားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုချိုးဖောက်ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဥပဒေအရ SLAPP ၏စီရင်ချက်က Prause အား Wilson ၏ရှေ့နေစရိတ်ပေးရန်တာဝန်ရှိသည်။
ငါသူမ၏ထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအမိန့်ကြိုးပမ်းမှုခဲ့သည်ယုံကြည်ပါတယ် လည်း Prause ကိုအခြားသူများကတရားစွဲဆိုထားသည့်အသရေဖျက်မှုနှစ်ခုတွင်သက်သေအဖြစ်ကျွန်ုပ်ကိုဂုဏ်တင်ရန်ကြိုးစားခြင်း။ ၎င်းသည်မအောင်မြင်ပါ၊ ယခုသူမအားကျွန်ုပ်အား“ အရှက်ရသွားသည်” ဟုနှစ်ပေါင်းများစွာလိမ်ပြောနေသည်ဟုဖော်ထုတ်ခဲ့သည်။
မှတ်သားရန်အရေးကြီးသည်ကန ဦး တရားသူကြီးက Prause အား ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင်သူကကျွန်ုပ်အားအကြောင်းကြားခြင်းမရှိဘဲတင်သွင်းချိန်တွင်ယာယီတားမြစ်မိန့်ကိုငြင်းဆိုခဲ့သည်။ သူမသည်သူမ၌အားနည်းသောကိစ္စရှိကြောင်းသူမအားကြီးသောအချက်ပြခဲ့သည်။ TRO ကိုငြင်းပယ်ခြင်းက Prause သည်တားမြစ်မိန့်ကိုကျွန်ုပ်အားအကြောင်းကြားရန်လိုအပ်ပြီး၊ ၎င်းသည်ကန ဦး ကြားနာခြင်းအတွက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
လာမယ့် ၃ လအတွက်၊ Prause ဟာလိမ်လည်လှည့်ဖြားမှုကိုတားမြစ်တဲ့အမိန့်ကိုသူကိုယ်တိုင်သက်ရောက်မှုမရှိဘဲနဲ့ကျဆင်းသွားနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရှေ့နေအခကြေးငွေကိုပြန်လည်အသုံးချစရာမလိုဘဲကျွန်တော်စွဲစွဲမြဲမြဲမှတ်မိနေမှာပါ။ ဇူလိုင်လတွင်ပြုလုပ်မည့်ကြားနာမှုတွင် Prause ၏ရှေ့မှောက်တွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမပြုရန်နှင့်ကျွန်ုပ်၏အသံကိုဖိနှိပ်ရန်အတွက်သူမအားခြိမ်းခြောက်သည်ဟုမတရားသဖြင့်စွပ်စွဲခံရခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေဖြင့်ဇွန်လတွင်ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သည် တားမြစ်မိန့်ကိုပယ်ဖျက်ရန် SLAPP လှုပ်ရှားမှု။ ထိုအချိန်တွင်သူမသာရှေ့ဆက်သွားနိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွင်တရားစွဲဆိုထားသည့်စာရွက်စာတမ်းများ -
တရားသူကြီးသည်ကြားနာခြင်းအားနှောင့်နှေးခြင်းမပြုရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Prause ကိုကုမ္ပဏီကိုယ်စားအကြံပေးရှေ့နေကကိုယ်စားပြုခဲ့သည်။ သူသည်သူမအတွက်အကောင်းဆုံးအလုပ်ကိုလုပ်ခဲ့သူဖြစ်သည်။
သူမ၏ကြေငြာချက်တစ်လျှောက်လုံးချီးမွမ်းခြင်းကိုလိမ်ခဲ့သည်။ သက်သေပြနိုင်သောဥပမာတစ်ခုမှာ Prause သည်“ဂယ်ရီဝီလ်ဆင်ရဲ့လုပ်ရပ်ကြောင့်ငါပြောင်းရွေ့တာအကြိမ်ပေါင်းများစွာ"။
tweets, အင်တာဗျူးများ, ဆောင်းပါးများနှင့်တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများအတွက်, Prause အကြိမ်ကြိမ်သူမ၏လည်ပင်းကိုဆင်းအသက်ရှူခြင်း (အဓိကအားဖြင့်ငါ) ကြောင့်သူမအဆက်မပြတ်ရွေ့လျားကြောင်းအကြိမ်ကြိမ်ပြောဆိုထားသည် ၂၀၁၁ ခုနှစ်သြဂုတ်လတွင်သူသည် ၂၀၁၉ ဇူလိုင်လ ၁ ရက်နေ့တွင်ပြောင်းရွှေ့သည်ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။Wilson ကနောက်ယောင်ခံကြောက်ရွံ့ခြင်းထဲက” (ရက်စွဲကိုမှတ်သားပါ):
ဟီလ်တန်တရားရုံးမှတိုင်ကြားချက်များကဲ့သို့ပင်၊ Prause ၏တားမြစ်မိန့်ကိုတောင်းခံရာတွင်သူမနေထိုင်ရာသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည့်အထောက်အထားမရှိခဲ့ပါ၊ ဒါဟာငွေလက်ခံဖြတ်ပိုင်းများသို့မဟုတ်ငှားရမ်းရန်အလွန်လွယ်ကူပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့် Prause အဲဒီလိုလုပ်ဖို့ပျက်ကွက်ခဲ့သည်။ သူမကအမှန်တရားကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည် သြဂုတ်လ, 2020 ဒေဝါလီအသနားခံစာ။ သူမသည်များအတွက်တာဝန်ယူမှုမှလွတ်မြောက်ရန်ဖို့တင်သွင်းခဲ့သည် (ဆဲလ်ငွေဒေါ်လာ ၂၇၀၀၀၀ (Prause ကအမှန်တကယ်ကွှေးမွီမဆပျနိုငျသောအရာဖွစျသညျမဟုတျပါ။ ) သည် 3-to-to-be-tryed အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံ (Hilton, Rhodes, Minc) ။ ဒီဖန်သားပြင် သူမ၏ဒေဝါလီခံဖိုင်ကို Prause သည်လွန်ခဲ့သော ၃ နှစ်ကပြောင်းရွှေ့ခြင်းမရှိသေးပါ။
ဘာကြောင့် Prause ဟာသူမဒေဝါလီခံခြင်းကြောင့်သူမနေထိုင်ရာ (သို့) စီးပွားရေးကိုပြောင်းရွှေ့နေခြင်းမရှိကြောင်းသူမဒေ ၀ ါလီခံစာရင်းတွင်အမှန်တရားကိုအဘယ်ကြောင့်နောက်ဆုံးတွင်ဖော်ပြနေတာလဲ။ ကောင်းပြီ, ဖိုင်ထဲမှာသူမဒေဝါလီခံတရားရုံးသို့စိစစ်ဘဏ္financialာရေးနှင့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစာရွက်စာတမ်းများအမျိုးမျိုးကိုပေးရမည်။ အကယ်၍ သူမ၏အမြဲတမ်းရွေ့လျားနေသည့်သူ၏ပုံပြင်သည်သူ၏စာရွက်စာတမ်းများနှင့်မကိုက်ညီပါကသူမအတုကိုစွပ်စွဲနိုင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက်အနေဖြင့် Hilton ဝတ်စုံနှင့်ကျွန်ုပ်၏ SLAPP ဝတ်စုံတွင် Prause ကိုအမှန်တကယ်စစ်ဆေးရန်စနစ်မရှိသောကြောင့်သူသည်အပြစ်ပေးအရေးယူခံရခြင်းမရှိခဲ့ပါ။
ကျွန်ုပ်၏တရားဝင်အောင်မြင်မှုသည်ဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် SCRAM Media ကို PFuse သည် NoFap အိမ်ရှင်အဲလက်စ်ရော့စ်စ်၏ရန်ပုံငွေရှာဖွေရေးအစီအစဉ်၏အကျိုးဆက်အနေဖြင့်“ သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှု” ကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်ဟူသောသတင်းကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရေးအတွက်တိုင်တန်းခဲ့သည်။ အရ ယူကေသတင်းထုတ်ပြန်ချက်, SCRAM ဇာတ်လမ်းက NoFap နှင့် Rhodes သည် (Semite Anti-Semites အပါအ ၀ င်) လက်ယာအစွန်းရောက်အစွန်းရောက်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်ဟုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ Prause နှောင့်ယှက်ဖို့လှုံ့ဆော်အစွန်းရောက်; Prause နောက်ယောင်ခံခံရဖို့ ဦး ဆောင်တဲ့ crowdfund ကောက်ယူ; နှင့် Prause ၏ပညာရေးဆိုင်ရာသုတေသနကိုရပ်တန့်စေရန်အတွက်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတရားရုံးတွင်အငြင်းပွားဖွယ်ရာတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုကိုတင်သွင်းခဲ့သည်။ ထိုတောင်းဆိုမှုများကိုသက်သေပြရန်အထောက်အထားများနှင့်တင်ပြသည့်အခါ SCRAM သည်ဆောင်းပါးကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပြီး Rhodes တွင်ကြီးမားသောပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများနှင့်ဥပဒေရေးရာကုန်ကျစရိတ်များကိုပေးခဲ့သည်။ လူသိရှင်ကြားတောင်းပန်ခဲ့သည်မတိုင်မီ လုံးဝပိတ်ပစ်. (အောက်တွင်အသေးစိတ်ဖော်ပြထားသည်)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုနှင့် ပတ်သက်၍ စိုးရိမ်ပူပန်မှုများပေါ်ပေါက်လာသောလူများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိလျက်နှင့်မှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်များဖြင့်စွပ်စွဲခံထားရသောဖက်ဒရယ်တရား ၀ င်တရားစွဲဆိုမှု ၃ ခုဖြင့်တရားစွဲခံရသည်။ (အထက်တွင်ကြည့်ပါ။ ) ထိုကိစ္စရပ်များတွင်တရားလိုများက Prause အားတရားမ ၀ င်၊ အသရေဖျက်မှုနှင့်လှောင်ပြောင်မှု၊ လိင်စော်ကားမှု၊ ဖြစ်ရပ်တစ်ခုစီတွင်အမျိုးသားများနှင့်အမျိုးသမီးများသည် Prause သည်လည်းသူတို့ကိုပစ်မှတ်ထားသည်ဟုကျိန်ဆိုသောကြေငြာချက်များဖြင့်ထွက်ပေါ်လာခဲ့သည်။
၄) သတိပြုပါ အသရေဖျက်မှုပြန့်ပွားမှုဥပဒေရေးရာတာဝန်ယူမှုကိုဖန်တီးနိုင်ပါတယ်
အလက်ဇန္ဒားရော့ဒ်စ်နှင့် NoFap အကြောင်းသတင်းအမှားများအတွက် SCRAM Media သည် Prause ကိုမှီခိုခဲ့သည်။ အဆိုပါထွက်ပေါက်သူမ၏မုသားပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ RhRS နှင့် NoFap တို့အားအကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကို SCRAM မှတောင်းပန်ခဲ့ရသည်။ အကျိုးဆက်အဖြစ်, ကံမကောင်း SCRAM စီးပွားရေးမှထွက်သွား၏။ အလားတူပင်၊ Prause ကလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Melissa Farmer အားအမေရိကန်ရှေ့နေ Aaron Minc နှင့် ပတ်သက်၍ အသရေဖျက်မှုပြန့်ပွားအောင်ဆွဲဆောင်ခဲ့သည်။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှင့် Prause နှစ် ဦး စလုံးသည်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခံထားရသည်။ (ဒီအပိုင်းအောက်ရှိအပိုင်းကိုကြည့်ပါ။ )
ဤတွင် SCRAM ၏တောင်းပန်စကားဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေလိုက်သောအရာသည် NoFap နှင့် Mr Rhodes တို့၏လုပ်ငန်းနှင့်ဒေါက်တာ Prause အားဆန့်ကျင်သော Mr Rhodes မှတင်သွင်းခဲ့သောအသရေဖျက်မှုပြောဆိုချက်နှင့်လုံး ၀ အထင်အမြင်လွဲမှားခြင်းနှင့်တိကျမှန်ကန်သောကိုယ်စားပြုမှုမရှိခြင်းနှင့်အဖွဲ့ဝင်များမှ Mr. ဒေါက်တာ Prause ကိုအနိုင်ကျင့်ရန်သို့မဟုတ်ခြိမ်းခြောက်ရန်အတွက်အစွန်းရောက်အမုန်းတရားအုပ်စုများ။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက် NoFap LLC နှင့် Alexander Rhodes တို့သည် Scram News မှသရေဖျက်မှုများနှင့်တောင်းပန်မှုများသိသိသာသာရရှိခဲ့သည် (22.05.20)
အခြေချမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ Mr Rhodes မှပြောကြားခဲ့သည်။
၅) Melissa Farmer ပါရဂူဘွဲ့သည် Prause-generate လုပ်သောလိမ်လည်မှုများအားပြန်လည်ရေးသားပြီးနောက်တွင်ပြန်လည်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Prause သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Melissa Farmer PhD အားရှေ့နေ Aaron Minc နှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏အသရေဖျက်မှုပြန့်ပွားစေရန်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အခြားရှေ့နေတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း Minc ၏ကုမ္ပဏီသည် Alexander Rhodes အား Prause အားတရားစွဲဆိုမှုတွင်ကိုယ်စားပြုနေသည် Rhodes ကိုယ်စားပြု (Minc မဟုတ်) Minc တစ်ခုတည်းမှာပဲ Twitter အကောင့်ရှိတယ်။ Prause သည် Minc အား Pcuse ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုနှစ်ပေါင်းများစွာတိုင်ကြားခဲ့သည်ဟု ဆို၍ ရိုင်းရိုင်းပြီးထောက်ခံမှုမရှိသောတွစ်တာများဖြင့်လူသိရှင်ကြားပစ်မှတ်ထားရသည့်အကြောင်းအရင်းဖြစ်ပုံရသည်။
Minc က Twitter ကိုလူသိရှင်ကြားငြင်းပယ်ခဲ့ပေမဲ့၊ Prause ရဲ့လိမ်လည်လှည့်စားသူ Farmer က Minc နှင့် ပတ်သက်၍ Prause ရဲ့အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတွစ်တာများကိုအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်ပြည်နယ်ရှေ့နေအသင်း၊ Cleveland Metropolitan Bar Association နှင့်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်၏တွစ်တာအကောင့်များသို့တိုက်ရိုက်ဝေမျှခဲ့သည်။ မင်းသမီး Minc သည်ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာချိုးဖောက်မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟုသူမမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍ အကျိုးသက်ရောက်မှုအတွက် Farmer သည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တရားရုံးချုပ်ဝက်ဘ်ဆိုက်မှယူထားသောအိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစည်းကမ်း ၄.၄ ၏မျက်နှာပြင်ပုံကိုပူးတွဲဖော်ပြခဲ့သည်။ (Prause သည်သူမ၏ smear ကင်ပိန်းများကိုအားဖြည့်ရန်ဆီလျှော်မှုမရှိသည့်ပြဌာန်းချက်များနှင့်စည်းမျဉ်းများကိုပုံမှန်ကိုးကားသည်။ ထို့ကြောင့်သူသည်သူမအားလယ်သမားကိုပုံရိပ်ပေးခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့သံသယရှိသည်။ )
စက်တင်ဘာလ ၉ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင် Aaron Minc သည် JD ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် တစ် ဦး အသရေဖျက်မှုဝတ်စုံကို Melissa Farmer ကိုဆန့်ကျင်။ Prause ၏ဒေဝါလီခံခြင်းတရားသူကြီးမှခွင့်ပြုပါက Prause အား Coam-defendant အဖြစ်လယ်သမားအသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုတွင်ထည့်သွင်းရန်ကတိပေးခဲ့သည်။ ကြည့်ပါ - ၂၀၂၀၊ စက်တင်ဘာ၊ Aaron Minc JD သည် Nicole Prause အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုမှုကိုကြေငြာခဲ့သည်။။ ချီးကျူးထိုက်စွာထည့်သွင်းခဲ့သည်။ Aaron Minc မှတင်ပြချက်သုံးခု:
Aaron Minc နှင့် Melissa Farmer (၂၀၂၀ စက်တင်ဘာ ၉ ရက်)
နေဖို့ကနေကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအတွက် Motion တိုင်ကြားချက်မှ Prause ထည့်သွင်းခြင်း (Prause ၏ဒေဝါလီခံရခြင်း) နိုဝင်ဘာ ၁၀ ရက်၊ ၂၀၂၀
ဒီအငြင်းပွားမှုနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ခံအချက်အလက်များ (23ပြီလ 2021, XNUMX)
ဤအတောအတွင်းတရားသူကြီးကလယ်သမား၏ရွေ့လျားမှုကိုပယ်ဖျက်ခြင်းကိုငြင်းပယ်ခဲ့ပြီးအမှုစစ်ဆေးခြင်းကိုပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ပုံမှလယ်သမားအာမခံကုမ္ပဏီက၎င်း၏ဖောက်သည်သည်အောင်မြင်နိုင်ဖွယ်မရှိကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့ပြီးသူမ Minc နှင့်ငွေရေးကြေးရေးသဘောတူညီမှုရရှိခဲ့သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ကြသည်။ ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလတွင်လယ်သမားသည် Minc နှင့်သဘောတူညီချက်ရခဲ့သည်။ ဒီအခြေချ၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ် လယ်သမားကကျမ်းသစ္စာကျိန်ဆိုချက်ကိုတင်သွင်းခဲ့သည် အခြားအရာများအကြား,
၅။ တွစ်တာတင်ပို့သည့်အချိန်တွင်၊ ကျွန်ုပ်သည်အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်၏ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြုအမူကိုဖောက်ဖျက်သောအမူအကျင့်တွင်ပါဝင်ခဲ့ကြောင်းကျွန်ုပ်၌သက်သေအထောက်အထားမရှိခဲ့ပါ။ အာရွန်မိုင်းကနီကိုးလ် R.Prause ၏အိမ်နှင့်အလုပ်လိပ်စာကိုတိုက်ရိုက်မပို့သောကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်အသိပညာမရှိပါ။ နှစ်ပေါင်းများစွာသူမ၏သတ်ပစ်ရန်ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ကြသူတွေကိုအုပ်စုတစု။ တွစ်တာထုတ်ဝေတာကိုကျွန်တော်လုံးဝနောင်တရမိတယ်၊ မစ္စတာမိုင်းအပေါ်စွပ်စွဲချက်များမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်အထောက်အထားမရှိပါ။ နီကိုးလ် R. Prause ၏ပြောဆိုချက်များမှန်ကန်ကြောင်းကျွန်ုပ်တွင်သက်သေအထောက်အထားမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်၏လုပ်ရပ်များကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောဆင်းရဲဒုက္ခများအတွက် Mr. Minc အားတောင်းပန်ပါသည်။ (အလေးပေးထောက်ပံ့)
အတိုချုပ်ပြောရလျှင် Melissa Farmer နှင့်သူမ၏ရှေ့နေများသည် Minc နှင့် ပတ်သက်၍ သူမ (Prause's) ၏အသရေဖျက်မှုဖော်ပြချက်ကိုခုခံကာကွယ်ရန်အကြောင်းပြချက်မျှမပေးနိုင်ပါ။ လယ်သမားကဒီအချက်ကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးသူမရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကိုလက်ခံပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ ဤသည်ကသူမ၏အမှားအမူအကျင့်တစ်ခုတည်း၏အကျိုးဆက်များကိုရင်ဆိုင်ရန် Prause ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ သို့သော်လယ်သမားသည် Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသော smear ကင်ပိန်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကြောင့်တရားစွဲဆိုမှု၏ဖိစီးမှု၊
ဤတွင်တစ်ဖန်၊ Prause ၏လိမ်လည်မှုများကိုဖြန့်ဝေခြင်းသည်လှည့်စားသူများအတွက်အကြီးအကျယ်ဂယက်ရိုက်နိုင်သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလ ၁၄ ရက်မှစ၍ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအတွက်လျှောက်ထားရန်လှုံ့ဆော်မှု:
စာမျက်နှာ ၃ တွင်ချီးမွမ်းခြင်းကိုနာမည်ပေးခြင်း။
စာမျက်နှာ ၆ - လယ်သမား၏ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းခြင်းက Prause ၏ပြောဆိုချက်များကိုငြင်းဆန်သည်။
၅။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာထိုင်။ မရပါ
ဇန်နဝါရီလ 2019 ခုနှစ်, Nicole Prause သည် YBOP ၏လူသိများသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်Wilson ၏ပိုင်ဆိုင်မှုကိုအသုံးပြုပိုင်ခွင့်အပါအ ၀ င် အမှန်တကယ် URL ကို ( "YourBrainOnPorn.com”), YBOP ကိုသူမ၏ကိုယ်ပိုင် site ဗားရှင်းနှင့်အတူအိုးအိမ်မဲ့စေရန်။ ၎င်းသည် Prause မှလုံးလုံးလျားလျားဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့သည် obsessive 8 နှစျကျြော Wilson ကနှောင့်ယှက်ခြင်းနှင့် defaming။ ထိုမျှမကသူလျှောက်ထားသောအမှတ်အသားများတွင်အခွင့်အရေးမရှိသူမည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းမသိကြောင်းကျိန်ဆိုထားသောလျှောက်လွှာကိုသူလိမ်ခဲ့သည်။ အမှတ်အသားတစ်ခုသည်ကျွန်ုပ်၏ URL ဖြစ်သော်လည်း (Prause ၏တိုက်ခိုက်မှုအောက်တွင်) နီးပါး ဆယ်စုနှစ်တစ်ခု! ဒဏ်ရာ။
သူမသည်ကြိုးစားခဲ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်ဆုပ်ကိုင်မှုသည်လည်းတရားမဝင်ပါ။ ၎င်းကိုဖိုင်တင်ရန်သူ (မှားယွင်းစွာ) က Prause မှလွဲ၍ မည်သူမျှအသုံးပြုပိုင်ခွင့်မရှိဟုပြောဆိုခဲ့သည် ငါ့ URLငါဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအသုံးပြုခဲ့ပြီးသောသူမလူသိရှင်ကြားနှစ်ပေါင်းများစွာကဲ့ရဲ့ခဲ့ သူမသည်သူမအမှတ်အသားကိုသုံးလျှင်၎င်းသည်“ ရှုပ်ထွေးမှုသို့မဟုတ်မှားယွင်းမှုကိုဖြစ်စေ၊ မှတ်ရန် ထိုကဲ့သို့သောတမင်တကာမှားယွင်းသောဖော်ပြချက်ကို USC 18 အောက်တွင်ဒဏ်ငွေသို့မဟုတ်ထောင်ဒဏ်သို့မဟုတ်နှစ်မျိုးလုံးအပြစ်ပေးနိုင်သည်.
Prause ၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်လွှာကကျွန်ုပ်အား (Wilson) အားသူမနှင့်စျေးကြီးသောဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲများသို့တွန်းပို့ခဲ့သည်။၈- မျက်နှာပါသောအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးနှင့်နီကိုးလ် Prause ကို ၂၀၁၁ မေလ ၁ ရက်၊) ။ ဖက်ဒရယ်တရားရုံးတွင်အမှုဖွင့်ရန်အချိန်တန်မှသာပြုလုပ်ခဲ့သည် သူမသည်မရိုးသားသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်လျှောက်ထားမှုကိုစွန့်လွှတ်သည် (အောက်တိုဘာ, 2019) ။
သူမ၏လျှောက်လွှာပြီးနောက် ပျက်ကွက်, ထိုကုန်အမှတ်တံဆိပ် Wilson က၏နာမ၌မှတ်ပုံတင်ပြီး 2020 ။
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ဆိုင်ရာအငြင်းပွားမှုများအတွက် Prause ၏ဥပဒေရေးရာအကြံပေးသည်တုန်လှုပ်စေသော“ တိုက်ဆိုင်မှု” တွင် Wayne B. Giampietro ဖြစ်သည်။ Backpage.com။ ဖယ်ဒရယ်အစိုးရကလူကုန်ကူးမှုနှင့်ပြည့်တန်ဆာလုပ်ငန်းများကိုတမင်ရည်ရွယ်ခြင်းဖြင့် backpage ကိုပိတ်ပစ်ခဲ့သည်။ (ဒီကိုကြည့်ပါ USA Today ဆောင်းပါး: Backpage တည်ထောင်သူများထံမှလိင်လူကုန်ကူးမှုစွပ်စွဲချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ 93-count စွဲချက်တင်).
Nicole Prause နဲ့ဘာဖြစ်နေတာလဲ။
လူမှုရေးမီဒီယာများနှင့်အခြားနေရာများတွင်လူအများနှင့်အဖွဲ့အစည်းများကိုဆိုက်ဘာနှောင့်ယှက်မှုများကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းဖော်ထုတ်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ကတည်းက Prause ၏အဓိကပစ်မှတ်မှာ Gary Wilson ဖြစ်သည် (ရာနှင့်ချီသောလူမှုမီဒီယာမှမှတ်ချက်များသည်နောက်ကွယ်မှအီးမေးလ်လှုပ်ရှားမှုများနှင့်အတူမှတ်ချက်ပေးသည်) Prause ၏တွစ်တာနှင့်ပို့စ်များကိုစောင့်ကြည့်ပြီးမှတ်တမ်းတင်ရန်လိုအပ်လာသည်။ သူမသည်သူမ၏သားကောင်များကိုကာကွယ်ရန်နှင့်အနာဂတ်ဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်မှုများအတွက်အရေးကြီးသည်။
ဤစာမျက်နှာတွင်နံပါတ် ၂ နှင့်ပတ်သက်သောတွစ်တာနှင့်မှတ်ချက်များကိုနမူနာယူထားသည်။ သူမသည်ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်၎င်း၏ရွေးချယ်ထားသည့်ရာထူးများကိုအားသွန်ခွန်စိုက်ထောက်ခံသည်။ နီကိုးလ် Prause သြဇာလွှမ်းမိုးမှုအတွက် Porn စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအားဖြင့်ဖြစ်သနည်း စာမျက်နှာကိုအဓိကအပိုင်း ၄ ပိုင်းခွဲထားသည်။
နှစ်ပေါင်းများစွာသက်သေအထောက်အထားများပေါ်တွင်ထိုင်ပြီးနောက် YBOP သည် Prause ၏တစ်ဖက်သတ်ကျူးကျော်မှုသည်မကြာခဏနှင့်မဆင်မခြင်သောအသရေဖျက်မှုအဖြစ်သို့ရောက်သွားသည်ဟူသောအမြင်ရှိသည် (သူမ၏သားကောင်များကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း "၏ကိုယ်ထိလက်ရောက်သူမ၏နောက်ယောင်","တကယ","သူမကိုမုဒိမ်းကျင့်ရန်အခြားသူများကိုအားပေးသည်, "နှင့်"နာဇီလက်သစ်ဖြစ်ခြင်း"), ငါတို့သူမ၏ဖြစ်နိုင်သောစိတ်ရင်းဆန်းစစ်ရန်အနိုင်အထက်ဖြစ်ကြောင်း။